सवारी चालक, पार्टी प्यालेस सञ्चालक हुँदै सर्प विज्ञ « Pariwartan Khabar
३१ असार २०७७, बुधबार ०७:३५
सुरुका दिनमा भण्डारीलाई सर्पको जात र त्यसको विषालु पन, आनीबानीको बारेमा केही थाहा थिएन । सर्प विशेषज्ञ डा. देव पाण्डे र सुनिल सापकोटासँग सर्पको बारेमा सिके । यूट्यूब र सर्पसम्बन्धी पुस्तकबाट यस बारेमा जानकारी लिए । दुई वर्ष यता कतिपय स्थानमा उनी डा. पाण्डेलाई लिएर जाने गरेका छन् भने कतिपय ठाउँमा उनी एक्लै पुग्ने गरेका छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।